XOG:- Gudiyadda Joogtada ah ee BFS oo go’aan deg deg ah soo saaray iyo mooshin ka dhan ah Mudane Jawaari | XOG:- Gudiyadda Joogtada ah ee BFS oo go’aan deg deg ah soo saaray iyo mooshin ka dhan ah Mudane Jawaari | Hal Sheegaha La Hubo
XOG:- Gudiyadda Joogtada ah ee BFS oo go’aan deg deg ah soo saaray iyo mooshin ka dhan ah Mudane Jawaari
Gudiyada joogtada ah ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan deg deg ah oo ay goordhow yeesheen waxaa ay uga hadleen khilaafka ka dhex taagan gudoonka Baarlamaanka Federaalka dalka iyo mooshinka ka dhanka ah Gudoomiye Jawaari.
Kulankan oo mudo dheer qaatay ayaa ugu dambeyn, waxaa laga soo saaray in gudiyo loo saaro sidii loo xalin lahaa khilaafka xildhibaanada ka dhex jira.
Gudiyada Joogtada ah ee baarlamaanka ayaa sheegay iney 25 xubnood u saareen iney la kulmaan gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka C/Weli Muudey iyo xildhibaanada kale ee ku kacsan gudoomiye Jawaari si khilaafka loo xaliyo.
Laakin gudiyada joogtada ah ee baarlamaanka ayaa umuuqda kuwa la safan gudoomiye Jawaari maadaama ay dhamaantood u arkaan xildhibaanada mooshinka gudbiyay kuwa la qalday.
Sidoo kale, gudiga ayaa doonaya in wadahadal toos ah ay wada yeeshaan Gudoomiye Jawaari iyo ku xigeenkiisa C/Weli Muudey.
Maxaa dhexmaray Gudiyada Joogtada ah ee Gudoomiye ku xigeenka Muudey.
Guddiyada Joogtada ayaa waxa ay sheegeen in Guddoomiye Muudey ay wax ka weydiiyeen Mooshinka loo soo gudbiyay ayna ka codsadeen inuu cadeyn keeno, intaasi kadibna uu soo gudbiyay 91 xildhibaan, oo 16 kalena ay ka laabteen.
Waxa ay sheegeen in arrintaasi darteed ay u buriyeen Mooshinka, maadaama uusan sharci aheyn, balse waxa ay tilmaameen in ay qalad aheyd in Guddoomiye Muudey uu warbaahinta la hadlo kadibna uu dhaho waa sharci Mooshinka.
Ugu dameyn Guddiga ayaa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) u sheegay inaan looga baahneyn mar walba oo ay wax dhacaan inuu isku soo xiro Wasaaradda Gaashaandhigga, balse looga baahan yahay inuu cadeeyo go’aankiisa ku aadan arrintan.
Xiisada siyaasadeed ee ka dhex jirta baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaartay heer aad usareysa iyadoo madaxda kale ee DFS ay dadaal ugu jiraan in xal loo helo arimahaan